﻿Download I-Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – isiXhosa from Official Microsoft Download Center
HausaI-DariIgboInuktitut (Latini)Isi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosiniya (isiSirilikhi) saseBosniaIsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsi-IndoneshiyaIsiJojiyaIsiKannadaIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiMalayalamIsiMalayi (saseBrunei Darussalam)IsiMalayi (saseMalaysia)IsiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNgesiIsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRashiyaIsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-UrduIsi-Uzbek (iLatini)IsiVietnamIsiWelshiIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliSetswana (Aforika Borwa)Turkmen (Latin) - TurkmenistanumAyirishi
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – isiXhosa inikeza isiXhosa i-intafeyisi yomsebenzisi ye-:
Isoftwe efunwayo: Nayiphi na isuwiti okanye ikopi ezimele yodwa ye-Microsoft Office 2010 iqulethe enye okanye ezininzi iiaplikheyishini ezilandelayo: i-Excel, i-OneNote, i-Outlook, i-PowerPoint okanye i-Word.
Isithuba sediski esifunekayo: Ukongeza kwisithuba sediski eqinileyo esisetyenziswa ziinkqubo ezifakelweyo ze-Office 2010, iimegabhayithi (MB) ezingama-20 zesithuba esikhoyo sediski eqinileyo ziyafuneka.
Ukufakela olu khuphelo:
Khuphela ifayile ye-LanguageInterfacePack.exe ngokucofa iqhosha (elingentla) lokuKhuphela uze ugcine ifayile kwidiski eqinileyo yakho.
Cofa kabini ifayile yenkqubo ye-LanguageInterfacePack.exe kwidiski eqinileyo yakho ukuqalisa inkqubo yoSeto.
Landela imiyalelo kwiskrini ukuzalisa ufakelo.
Yakuba ifakelwe ifayile engundifunde ye-Microsoft Office 2010 Language Interface Pack ingafunyanwa ku-C:\_Program Files\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE14\_LCID\_LIPread.htm
Ukuhlaziywa kwe-Office 2007 nge-Office 2007 Language Interface Pack okanye ushicilelo lwangaphambili ihlaziyelwa kwi-Office 2010 nge-Office 2010 Language Interface Pack akuxhaswa. Ukuba unqwenela ukuhlaziya ufakelo lwakho lwesiseko lwe-Office 2007 ku-Office 2010 nge-Office 2010 Language Interface Pack umele u-:
Khupha ufakelo lwe-Office 2007 Language Interface Pack
Sebenzisa u-Office 2010 uze ukhethe indlela yokhetho yokuhlaziya.
Xa lugqityiwe useto lwe-Office 2010, fakela kwaye wakhele i-Office 2010 Language Interface Pack
Ukwenziwa kwemveliso ye-Office yakho isebenze:
Ukuba unengxaki yokuyifunda yonke iKhowudi yoFakelo kwincoko ye-"Microsoft Office Activation Wizard", okanye yonke ikhowudi yofakelo ayibonisi ngokuchanekileyo xa usebenzisa i-Microsoft® Office Language Interface Pack 2010, nceda rhoxisa iwizadi uze utshintshele kolwakho isiNgesi sase-US lwemveliso ukuyenza isebenze imveliso yakho ye-Microsoft Office.
Ukutshintshela i-Intafeyisi yoMsebenzisi yakho kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiXhosa, landela la manyathelo:
Lontsha iiLwimi eziKhethwayo ze-Microsoft Office 2010 kwimenyu kaQalisa\_Zonke iiNkqubo\_i-Microsoft Office\_Microsoft Office Tools .
Phantsi koKhetha uBonisa neeLwimi zoNcedo, phantsi koBonisa uLwimi khetha ulwimi olufunwayo uze ucofe kwiqhosha Seta njengesiSeko .
Phantsi koKhetha iiLwim zokuHlela, khetha ulwimi olufunwayo uze ucofe kwiqhosha Seta njengesiSeko .
Cofa iqhosha Kulungile .
Iisethingi zolwimi ozikhethileyo ziya kusebenza xa uqalisa iiaplikheyishini ze-Office.
Qaphela: U-Help akanakutshintshelwa kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiXhosa. U-Help uya kusoloko ehleli kulwimi lwakho lofakelo-ngqangi.
Soloko useta uncedo lokubonisa kuluhlu oluhlayo kulwimi lwesiseko.
Ukushenxisa olu khuphelo:
Landela la manyathelo kwi-Windows XP Home okanye kwi-Professional Edition:
Shiya zonke iinkqubo.
Cofa kwiayikhoni yeeNkqubo zikaYongeza okanye ezikaShenxisa kwiPhaneli yoLawulo lwe-Windows.
Cofa ku-Microsoft Office Language Interface Pack 2010 kwibhokisi yeeNkqubo ezifakelweyo ngoku , uze ucofe iqhosha likashenxisa .
Landela imiyalelo kwiskrini.
Landela la manyathelo kwi-Windows Vista okanye kwi-Windows 7:
Cofa kabini kwiayikhoni yeeNkqubo neemo kwiPhaneli yoLawulo lwe-Windows.
Kwindlela yokhetho enguKhupha ufakelo okanye Tshintsha iNkqubo , cofa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiXhosa kwibhokisi yeeNkqubo ezifakelweyo ngoku , uze ukhethe indlela yokhetho enguKhupha ufakelo.
Ukuba akukwazi ukubona oko kuqulethwe ziifayile zeCHM emva kokuba ilayishiwe, unothabatha la manyathelo alandelayo enokwenza ukwazi ukubona oko kuqulethweyo :
Vula ifolda apho ulayisehele khona iifayile zeCHM.
Cinezela ekunene kwiCHM uze kwimenyu ebonakala, ukhethe Izilungiso.
Kwi Thebu eGabalala, cinezela Iqhosha lokukhulula uze ucinezele iqhosha elithi LUNGILE.
Cinezela kabini kwiifayile zeCHM uza kubona oko zikuquletheyo.